Etu esi eme ka ụdị font dị na WhatsApp Web | Gam akporosis
Otu esi eme ka onu ogugu di na WhatsApp Web
Ignacio Lopez | 21/04/2021 20:00 | Nkuzi, Whatsapp
Dịkwuo font size na WhatsApp Web ma ọ bụ ozugbo na ngwa gam akporo, ọ bụ otu n'ime ihe ngwọta kachasị ọsọ maka ndị ahụ na-amalite ịnwe nsogbu nsogbu nke ike gwụrụ, nọrọ ọtụtụ oge n'ihu kọmputa ma ọ bụ naanị chọọ ịhụ ọdịnaya ahụ na-enweghị ịgakwuru ihuenyo ahụ.
O doro anya na site na mbata ya na ahịa, WhatsApp aghọwo akụrụngwa ozi eji eme ihe gburugburu ụwaDaalụ na site na mbido ọ bụ n'efu (ma e wezụga maka oge na iOS ebe ọ na-efu euro 0,99).
Na nke a, anyị ga-agbakwunye na n'ime afọ abụọ gara aga, ọ ghọkwara a ezigbo ngwá ọrụ nkwukọrịta maka ụlọ ọrụ, na-emepe ohere azụmaahịa ọhụrụ maka obere ụlọ ọrụ, ọ bụ ezie na n'oge a, ha anaghị enweta ọtụtụ ihe na Facebook chọrọ.
Ọ bụ eziokwu na Telegram dị mma karịa ma dịkwa mma karịa, n'ihi na ọ na-arụ ọrụ n'adabereghị na smartphone, n'agbanyeghị agbanyeghị ndị ọrụ karịrị nde 500 n'ụwa niile, WhatsApp na ihe karịrị ndị ọrụ 2.000 nde Akụ bụ eze nke izi ozi.
Ọ bụrụ n’inweghị WhatsApp, ọ dịka ị nweghị ekwentị na Onye na-enweghị ama taa? N'ịbụ ndị a na-ejikarị ụlọ ọrụ ndị ọzọ eme ihe, ụlọ ọrụ ahụ na-agbasawanye ọnụ ọgụgụ nke ọrụ enyere site na WhatsApp Web, naanị otu ụzọ ikpo okwu a si enye anyị ka anyị nwee ike isoro ndị ahịa nwee nkasi obi site na kọmputa na ọ bụghị site na ama.
N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ọ bụghị naanị mgbanwe font size nke mere na ọ nwere nkasi obi na ngwa ngwa ịgbaso mkparịta ụka ahụ, mana na mgbakwunye, anyị nwekwara ike ịgbakwunye obi ike, italic, gbatuo ederede ... Ọrụ ndị a abụghị naanị site na ntanetị weebụ, kamakwa site na ngwa gam akporo. .
1 Esi gbanwee ụdị font na WhatsApp Web
2 Esi gbanwee ụdị font na Desktọpụ WhatsApp
3 Esi gbanwee nọmba font nke WhatsApp na gam akporo
4 Etu esi eji obi ike na WhatsApp
5 Etu esi eji italic na WhatsApp
6 Etu esi agafe ederede na WhatsApp
7 Etu esi eji monospaced na WhatsApp
8 Uzo mkpirisi WhatsApp Web
9 Esi gbanwee ụdị font na WhatsApp
10 Esi rụọ ọrụ ọchịchịrị na WhatsApp Web
11 Esi gbanyụọ ọkwa desktọọpụ
Esi gbanwee ụdị font na WhatsApp Web
N'ezie, WhatsApp Web adịghị enye anyị ọ bụla ala ọrụ N'ime nhọrọ nhazi nke na-enye anyị ohere ịbawanye ma ọ bụ belata nha nke font, agbanyeghị, enwere ntakịrị aghụghọ iji nwee ike ịme ya.
Nke a aghụghọ mejupụtara mbugharị na taabụ WhatsApp Web, nke mere na ọdịnaya niile egosiri na-ebuwanye ibu ma dịkwa mfe ọgụgụ. Iji mee nke a, anyị ga-emepe WhatsApp Web, wee pịa igodo ya Njikwa na akara ọtụtụ ugboro ka ọ dị mkpa.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iwelata nha, anyị ga-pịa nchikota igodo Njikwa na ihe ịrịba ama ahụ - Ka ọtụtụ ugboro dị ka mkpa. Asingbawanye ma ọ bụ belata echiche nke WhatsApp Web anaghị emetụta ndị ọzọ taabụ, yabụ na anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị maka ịhapụ mbugharị dị ka ọ dị tupu emezigharị ya.
Esi gbanwee ụdị font na Desktọpụ WhatsApp
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ọtụtụ mmadụ na-eji ya, WhatsApp na-enye ndị ọrụ Windows niile a ngwa site na Storelọ Ahịa Microsoft, Desktọpụ WhatsApp, nke na-enye ohere ịnweta ngwa izipu ozi n'otu ụzọ ahụ site na ihe nchọgharị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ nke ngwa a, ị nwere ike were otu ughaAgbanyeghị, enwere oke ịgba karịa mgbe ị na-amụba leta ahụ, yabụ ọ bụrụ na ezughi gị, ị ga-ahọrọ iji ụdị ntanetị nke WhatsApp ebe enweghị oke ịgba.
Esi gbanwee nọmba font nke WhatsApp na gam akporo
Versiondị WhatsApp maka gam akporo, n'adịghị ka nsụgharị weebụ, ee nke ahụ na-enye anyị ohere ime ka font abawanye, ka ndị ọrụ ghara inwe nsogbu mgbe ha na-agụ mkparịta ụka ndị ahụ.
Ihe mbu anyi gha eme bu inweta mwube nke ngwa.
N'imeIkechi, anyị nweta nhọrọ nke nnweta.
Na annweta, pịa na Font size.
Nhọrọ nhọrọ nke anyị hụrụ na nhọrọ a bụ: Kpebiri, Grande o Nnukwu nnukwu.
Etu esi eji obi ike na WhatsApp
Iji dee ederede n'uzo di omimi, anyi aghaghi itinye akara akara na mbido na njedebe nke okwu ma obu ederede. Ọ bụrụ na anyị dee * Gam akporo * ịpị igodo izipu ga-egosipụta ederede Androdsis na nkwuwa okwu.
Ọ bụrụ na anyị dee * Androidsis jụụ * ọ ga-egosi Androidsis dị jụụ nkwuwa okwu.
Iji dee na obi ike na WhatsApp na ngwaọrụ gam akporo, anyị ga jisie ike pịa ogologo ederede ị na-abanye na igbe ederede na họrọ More - Obi ike.
Etu esi eji italic na WhatsApp
Iji iticicize a ederede, anyị ga-agụnye akara mmuke na mmalite na njedebe nke okwu ma ọ bụ ederede. Ọ bụrụ na anyị dee _Ikechi ịpị igodo izipu ga-egosipụta ederede Androdsis n'akwụkwọ italics.
Ọ bụrụ na anyị dee _Androidsis cool_ ọ ga-egosi Androidsis dị jụụ n'akwụkwọ italics.
Iji dee italiki na WhatsApp na ngwaọrụ gam akporo, anyị ga jisie ike pịa ogologo ederede ị na-abanye na igbe ederede na họrọ More - Italic.
Etu esi agafe ederede na WhatsApp
Iji dee ederede na ntanetị, anyị kwesịrị ịgụnye akara mmuke na mmalite na njedebe nke okwu ma ọ bụ ederede. Ọ bụrụ na anyị dee ~ Androidsis ~ ịpị igodo izipu ga-egosipụta ederede Androdsis na strikethrough.
Oburu na anyi dee ~ Androidsis cool ~ o gha egosi Androidsis dị jụụ na strikethrough.
Iji dee italiki na WhatsApp na ngwaọrụ gam akporo, anyị ga jisie ike pịa ogologo ederede ị na-abanye na igbe ederede ma họrọ More - Gafere
Etu esi eji monospaced na WhatsApp
Iji dee ederede na monospaced, anyi aghaghi itinye akara akara na mbido na njedebe nke okwu ma obu ederede. Ọ bụrụ na anyị dee «Nkọwa AndroidsIngpị igodo izipu ga-egosipụta ederede Androdsis na monospaced.
Ọ bụrụ na anyị dee «` `Androidsis mola« ', Androidsis mola ga-egosipụta na monospaced.
Iji dee na monospace na WhatsApp na ngwaọrụ gam akporo, anyị ga jisie ike pịa ogologo ederede ị na-abanye na igbe ederede ma họrọ More - Monospaced
Uzo mkpirisi WhatsApp Web
Zọ mkpirisi ahụigodo ahụ na kọmputa, ozugbo ịme gị ahụ, naị gaghị ebi ndụ na-ejighị ha, ebe ọ bụ na ha na-ekwe ka anyị nwekwuo arụpụtaghị ihe site na ịghara ịdabere na oke iji rụọ ọrụ ndị anyị nwere ike ime na-enweghị ikewapụ aka anyị na keyboard.
Agbanyeghị na ọ nwere ike iju gị anya, na-atụle WhatsApp ahụ, dịka ngwa niile na-esite na Facebook, na-agụnye usoro nke ụzọ mkpirisi keyboard maka ụdị ntanetị, shortzọ mkpirisi nke anyị nwere ike isi nwee ike iji kparịta ụka ọhụrụ, kaa ozi dị ka agụ, rụọ nyocha ...
Lee, anyị gosiri gị ihe niile zọ mkpirisi keyboard site na WhatsApp Web:
Kaa ozi dị ka agụ Ctrl + Alt Mgbanwe + U
Ogbi mkparịta ụka Ctrl + Alt Mgbanwe + M
Dekọọ nkata Ctrl + Alt E
Hichapụ nkata Ctrl + Alt + Oghere
Tọọ nkata Ctrl + Alt Mgbanwe + P
Chọọ na ngwa ahụ Ctrl Alt + / Na Na Na
Chọọ na nkata Ctrl + Alt Mgbanwe + F.
Mkparịta ụka ọhụụ Ctrl + Alt N N
Ndi ohuru Ctrl + Alt Mgbanwe + N
Profaịlụ na ozi Ctrl + Alt P
Nhọrọ nhazi Ctrl + Alt
Esi gbanwee ụdị font na WhatsApp
Nkwupụta magburu onwe ya iji dọta uche nke ndị ahịa anyị, ọ bụrụ na anyị jiri WhatsApp Business na azụmaahịa anyị jiri akwukwo iche dabere na ụdị ozi anyị na-ezigara ndị ahịa anyị, ka anyị wee nwee ike ịchọta ozi kachasị masị gị.
Mgbe anyị nọ na gam akporo anyị nwere ike iji mpempe akwụkwọ dị iche site na ngwa dị ka Fancy Text Generator, na desktọọpụ ụdị, ọ dị nwute anyị enweghị ike iji isi mmalite ọzọ, yabụ ọ bụrụ na anyị nwere echiche ime ya, anyị nwere ike ichefu banyere ya.
Fancy ederede generator & akara
Developer: sTech ọhụụ
Nanị nhọrọ ga-abụ idetuo na mado ederede anyị chọrọ iji oge niile na isi mmalite ndị ọzọ, na faịlụ ederede mgbe niile ka ha na aka dị ka isi iyi.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ jiri Kaomoji na ozi anyi site na WhatsApp Web, anyị nwere ike ime ya site na ngwa afọ nke dị na Windows site na ụzọ mkpirisi keyboard Windows +. (oge). Obere ngwa a na-enye anyị ohere itinye ọnụ ọgụgụ nke kaomoji ma ọ bụ akara, yana emojis, ọ bụ ezie na WhatsApp enweworị ọtụtụ nke a.
Esi rụọ ọrụ ọchịchịrị na WhatsApp Web
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị, nke were ogologo oge iru ụdị nke ngwaọrụ mkpanaka, dịkwa na WhatsApp Web yana site na WhatsApp Desktop. Ọrụ a, jiri ụda ojii na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dochie ihe eji eji ọkụ na-eme n’azụ ngwa ahụ, dochie agba ojii nke akwụkwọ ozi ahụ na nke isi awọ.
N'ụzọ dị otú a, ekele maka ọnọdụ gbara ọchịchịrị, anyị nwere ike iji WhatsApp Web na-enweghị anya anyị na-ata ahụhụ karịa ihe dị mkpa mgbe ọkụ gbara ya gburugburu dị obere. WhatsApp na-enye anyị nhọrọ 3 mgbe ị na-ahazi isiokwu anyị chọrọ iji:
Ndabere site na usoro
Ọ bụrụ na anyị chọrọ isiokwu nke ụdị weebụ nke WhatsApp a gbanwere n'otu oge ahụ dị na ngwaọrụ mkpanaka anyị, Anyị ga-ahọrọ Ndi an-kpọ site na usoro. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ bụrụ Ìhè ma ọ bụ Ọchịchịrị mgbe niile, naanị anyị ga-ahọrọ site na nhọrọ nhazi nke ntanetị WhatsApp.
Esi gbanyụọ ọkwa desktọọpụ
Eleghi anya, karịa otu oge, ịchọrọ ịkwụsị nwa oge WhatsApp Web na kọmputa gị ka ị ezumike, mee ihe ndị ọzọ chọrọ nlebara anya pụrụ iche ... Muting smartphone abụghị ihe ngwọta, ebe ọ bụ na n'agbanyeghị na ama anyị anaghị ada ụda, ụdị weebụ ahụ na-eme.
Iji deactivate desktọọpụ ificationsma Ọkwa nke WhatsApp Web, anyị nweta nhọrọ nke Mbido, pịa na .Ma ọkwa na anyị akara igbe Gbanyụọ ọkwa desktọọpụ niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Otu esi eme ka onu ogugu di na WhatsApp Web
Etu ibudata na kpọọ Mario Kart Tour na PC